अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल - Shiksha Sansar
अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन गर्दै त्रिभुवन विमानस्थल
प्रकाशित मिति: २७ चैत्र २०७५, बुधबार
काठमाडौँ,२७ । रनवेमा उड्नका लागि तम्तयार नेपाल वायुसेवा निगमलाई ४ मिनेट थप समय नदिएको त्रिभुवन विमानस्थल व्यवस्थापनले विदेशी कम्पनीको जहाजलाई भने बन्द भइसकेको विमानस्थल थप १७ मिनेटसम्म खोलेर उडाएको छ।
विमानस्थलले धावनमार्ग मर्मतका लागि राति १० बजेपछि हुने उडान बन्दको अन्तर्राष्ट्रिय नियम (नोटाम) उल्लंघन गर्दै फ्लाई दुबई उडान नं. एफजेड ५७४ लाई मंगलबार राति उडान अनुमति दिएको हो। उड्डयनकर्मीहरुका लागि जारी गरिने नोटाम लागू भइसकेपछि उडान अनुमति दिन मिल्दैन।
यही व्यवस्था देखाएर विमानस्थल प्रशासनले गत मंगलबार दुबईका लागि उड्नुपर्ने फ्लाइट नम्बर आरए २३१ विमानस्थलमै रोकिदिएको थियो।
सो घटनाको एक सातापछि मंगलबारको विमानस्थल प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लङ्घन गर्दै फ्लाइ दुबइको जहाज उड्न दिएको हो। स्रोतहरूका अनुसार राति १०:१७ बजे फ्लाई दुबईको बोइङ७३७ विमान विमानस्थल बन्द भइसकेको १७ मिनेटपछि उडान भर्न दिएको हो। फ्लाई दुवईले मंगलबार राति ८ बजेर ४० मिनेटको उडान तालिका राखेको थियो। तर सो समयमा उडान हुन नसकेपछि उडान नं. एफजेड ५७४ को डिले सेड्युल गरिएको थियो।
यसको १ साताअघि १९ गते निगमको जहाजले काठमाडौं–दुबई उडानका लागि विमानस्थल व्यवस्थापनसँग ४ मिनेट थप गरी उडान भर्ने अनुमति माग्दा विमानस्थलले अनुमति दिएको थिएन। साेही कारण यात्रुहरु रातभर विमानभित्रै बस्न बाध्य भएका थिए।
निगमको जहाजको उडान तालिका उक्त दिन राति ९ः१५ मा भए पनि त्रिभुवन विमानस्थलले १० बजेसम्म पनि निगमको विमानलाई उडान भर्ने अनुमति नदिएर सोही समयमा एटीसीले चिनियाँ कम्पनीको ड्रागन एयरलाइन्सलाई भने उडान अनुमति दिएको थियो।
निगमको फूल अकुपेन्सी उडान रोकेर विदेशी कम्पनीलाई उडान अनुमति दिएको भन्दै विमानस्थल व्यवस्थापन र निगमबीच विवाद भएकाे छ।
निगमको जहाज रोकिएको विषयमा छानबिन समिति समेत गठन भइसकेको छ। पाँच दिनको समय दिएर अघिल्लाे साताकाे बुधबार गठन भएको समितिले एक साता हुँदा समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
निगमको वाइडबडी विमानमा २ सय ७४ यात्रु तथा १४ चालक दलका सदस्यसहित २ सय ८८ जना रहेका थिए। विमान क्याप्टेन प्रवन धितालले उडाउने तयारी गर्दै थिए तर एक्कासि उडान रद्द भएपछि निगमले केही यात्रुलाइ बास बस्ने होटलको व्यवस्था गर्नुपरेको थियो। केही भने विमानभित्रै बसेका थिए।
हाल विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतका लागि भन्दै यही चैत १८ गतेदेखि विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द हुँदै आएको छ।